BUDDHIST TERMS' Dictionary: BURDEN - ဘာရ၊ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး
BURDEN - ဘာရ၊ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး
ဘာရ (Bhᾱra) - ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး။
စင်စစ်အားဖြင့် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဟူသည် ခန္ဓာငါးပါးပင်ဖြစ်သည်။ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းဆောင်သူဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါကိုပင် ဆိုလိုသည်။ လောကတွင် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးကို ရယူခြင်းသည် ဒုက္ခကို ရယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ချမ်းသာသုခ ဟူသည်မှာ ခန္ဓာငါးပါး ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို စွန့်လွှတ်နိုင်သော ဘုရား ရဟန္တာ အဖြစ်ပင်ဖြစ်သည်။
The five aggregate (khandha) are in reality what constituteaburden. The bearer of the burden is no one but the person or being himself in question, for the five aggregates which embody existence in effect makes him the barer of the burden. Well-being, therefore, is being free of the burden, the state of happiness achieved by the Buddhas and the arahats.